Maka: ukusesha isayithi le-google | Martech Zone
Maka: ukusesha isayithi le-google
NgoLwesihlanu, ngoJuni 27, i-2008 NgoLwesine, Novemba 22, 2012 Douglas Karr
Umngani omuhle nesisebenza naye, uMarty Bird, uveze lesi sici esithokozisayo engingakaze ngisibone kuGoogle. Amandla okwenza usesho lwesayithi ngaphakathi komphumela wangempela wosesho: Ngisebenzisa iSayithi Search kancane kuGoogle. I-syntax ilula impela futhi imvamisa ishesha kunokusebenzisa indlela yokusesha yangaphakathi yesayithi. Uma ubufuna ukusesha isiza sami, ngokwesibonelo, kumathiphu wokuthunyelwe kwe-Indianapolis, i-syntax isayithi: martech.zone indianapolis. Ku-
I-WordPress: Landelela Ukuseshwa Kwesiza nge-Google Analytics
NgeSonto, Novemba 4, 2007 ULwesithathu, April 1, 2015 Douglas Karr
I-Google Analytics inesici esihle, ikhono lokulandela usesho lwangaphakathi kusayithi lakho. Uma usebenzisa ibhulogi ye-WordPress, kunendlela elula yokusetha i-Google Analytics Site Search: Khetha isayithi lakho ku-Google Analytics bese uqhafaza ku-Hlela. Zulazulela ekubukweni ofuna ukusetha khona iSayithi Search. Chofoza Izilungiselelo zokubuka. Ngaphansi Kwamasethingi Wokusesha Kwesiza, setha Ukulandelela Ukucinga Kwesiza ku-ON. Ku-Query Parameter field, faka i-